फिफा विश्वकपः खेल सुरु नहुँदै इतिहास मै ५ ठूला विवाद, » खबरहरुको एउटै केन्द्र
फिफा विश्वकपः खेल सुरु नहुँदै इतिहास मै ५ ठूला विवाद,
बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १४:०३ मा प्रकाशित !
एजेन्सी। फिफा विश्वकप सुरु हुन एक सातामात्र बाँकी छ । तर, यसपटकको विश्वकप विवादका कारण खेल सुरु नहुँदै चर्चामा छ । खेल विश्लेषकहरुले यसपटकको विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा बढी विवादित भएको बताएका छन् । ताजा विवाद मेक्सिकोको टिमका कारण भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार मेक्सिको टिमका खेलाडीहरुले रुस जानुअघि वेश्याहरुसँग पार्टी गरेका थिए । टिम व्यवस्थापनले भने खेलाडी खाली समयमा स्वतन्त्र हुने भन्दै यो घटनामा सफाइ दिएको छ । उता रुसको राजधानी मस्कोमा पर्यटकका लागि रोबोट सेक्स सेन्टर खोलिएका कारण पनि विवाद भएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: कर्णाली प्रदेशमा ११० नयाँ कुष्ठ रोगी फेला
NEXT POST Next post: म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका पूर्व कप्तान सागर थापासहित ६ जनालाई सफाइ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १४:०३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १४:०३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १४:०३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १४:०३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १४:०३